Wasiirka Warfaafinta oo dhagax-dhigay dhisme masaajid laga hirgelinayo Wasaaradda | Salaan Media
Wasiirka Warfaafinta oo dhagax-dhigay dhisme masaajid laga hirgelinayo Wasaaradda
Hargeysa, (SM)- Wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) ayaa maanta dhagax-dhigay dhismaha masaajid laga hirgelinayo xarunta wasaaradaas.
Masaajidkan oo ay hirgelinayso dhismihiisa hay’adda waddaniga ah ee Suna khayriya, Wasiirka oo hadal ka jeediyay dhagax-dhigaas ayaa waxa uu sheegay in masaajidkaasi dabooli doono baahida ay u qabaan masaajid ku filan oo ay ku cibaadaysan doonaan shaqaalaha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda oo tiradoodu badan tahay. Waxaanu wasiirku uga mahad-naqay hay’adda Suna khayriya oo ugu deeqday dhismaha masaajidkaas.
“Waxa aanu maanta dhagax-dhigaynaa dhisme cusub oo masaajid ah oo laga hirgelinayo xarunta wasaaradda warfaafinta, hay’adda Suna khayriya ayaa wasaaradda ka caawisay dhismahan, waxaana isticmaali doona shaqaalaha wasaaradda qaybaheeda kala duwan oo boqol ku dhawaad ah, markaa suurtogal maaha masaajidkan hore eek u yaalay inuu ku filaado rag iyo dumarba. Sidaa darteed waxaan uga mahad-naqayaa hay’adda dhismaha masaajidka naga caawinaysa.” ayuu yidhi Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland.